Toeram-bavaka 30 Taom-bavaka 2020 | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Toeram-bavaka 30 ho an'ny taom-baovao 2020
Salamo 24: 7-10:
7 Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata, ianareo varavarana maharitra; dia hiditra ny Mpanjakan'ny voninahitra. 8 Iza izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah mahery sy mahery, ny Tompo mahery amin'ny ady. 9 Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; atsangano, ry varavarana fahagola; dia hiditra ny Mpanjakan'ny voninahitra. 10 Iza izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon'ny maro, Izy no Mpanjakan'ny voninahitra. Selah.
Tsara ho tsara hatrany ny hanombohana ny taona vaovao miaraka amin'ny vavaka. Rehefa manokan-taona ho anAndriamanitra isika dia miantoka ny fihenan-tsika tsy misy fotony amin'ny taona. Bevohoka isan-taona ny faharatsiana lehibe sy lehibe, noho izany dia tsy maintsy mivavaka isika fa ny raintsika any an-danitra dia miaro antsika amin'ny ratsy ary mitondra ny soa ho ao an-tranontsika. Fanapahan-kevitra isan-taona ny fanapahan-kevitra, tsy maintsy mivavaka ny fanahy masina isika hanampy antsika handray fanapahan-kevitra tsara mba hahatrarana antsika amin'ny taona vaovao. Feno isan-karazany ny olona isan-taona, dia tsy maintsy mivavaka isika fa ny fanahy masina dia hitari-dalana antsika ho any amin'ny olona mahitsy mba hahatongavantsika any ambony. Izany antony rehetra izany sy ny maro hafa koa dia ny antony nanangonako ireo vavaka 30 ho an'ny taom-baovao 2020.
Ireo teboka entin'ny vavaka dia hametraka anao amin'ny lalan'ny fahombiazana rehefa mivavaka azy ireo ianao. Ireo izay manetry tena ihany koa no mangataka fitarihana izay hotahin'Andriamanitra. Tsy maintsy mahatakatra ianao fa ny kristiana mivavaka dia tsy ho resin'ny devoly sy ny mpiasany. Ka rehefa manomboka ny fotoanao amin'ny vavaka, ny anjelin'ny tompo dia mialoha anao ao anatin'ny taona ary manao ny lalana mamily rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Hitako fa mahasoa anao amin'ny fomba vaovao ny fahantom-bavaka amin'ny taom-baovao.
1. Ray ô, misaotra anao noho ny hatsaranao sy ny asanao mahatalanjona tamin'ny fiainanao tamin'ny taona 2019 aho.
2. Ry Tompo, tantano ny zavatra tsara rehetra momba ahy amin'ity taona 2020 ity.
3. Aoka Andriamanitra ho Andriamanitra eo amin'ny fiainako amin'ity taona 2020 ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Avelao Andriamanitra hitsangana ary hanala baraka ny hery rehetra manafika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako amin'ity taona 2020 ity amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Aoka ny hadisoam-panantenako rehetra ho tonga fanendrena avy amin'Andriamanitra amin'ny fiainako amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Aoka ny rivotra sy ny tafio-drivotra rehetra hampanginina amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Ianao Andriamanitra vaovao amin'ny fiandohana vaovao, atombohy fahagagana vaovao amin'ny fiainako amin'ity taona ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Aoka ny zavatra manakana ahy amin'ny fahalehibiazina ho torotoro amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Aoka ny fanosorana ny latsahana ara-panahy ho tonga amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Tompo ô, avereno aho ho eo amin'ny toerana mety.
12. Ry Andriamanitry ny fiandohana vaovao, sokafy amiko ny varavarana miroborobo amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Tompo ô, omeo hevitra voahosotra aho ary tariho aho amin'ny làlan'ny fitahiana vaovao, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Avereno miverina amin'ny fitahiana marobe maro, amin'ny anaran'i Jesosy ny taonako rehetra sy ny ezaka ataoko.
15. Ny volako dia tsy ho tafiditra ao anatin'ny mosary ara-bola amin'ity taona ity, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Izaho dia mandà ny fanahy rehetra mahamenatra ara-bola, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Tompo ô, ento tantely avy amin'ny vatolampy aho, ary avelao aho hahita ny lalana lazain'ny olona fa tsy misy lalana.
18. Izaho dia manambara tsy manjavozavo ary manafoana ireo teny ratsy rehetra izay nolazaiko hanoherana ny fiainako, ny tokantranoko, ny asako ary ny sisa, avy amin'ny rakitsary satana, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Amin'ity taona ity, tsy ho lefy amin'ny fahagagana hataoko aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Aoka ny marary rehetra amin'ny fankahalana, ny fankahalana ary ny fifandirana ao an-tokantrano ho malemy, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Mandidy ny fetra rehetra an'ny satana aho amin'ny fahasalamako sy ny vola azoko esorina, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Aoka handova ny fetra rehetra hahazoana hahazoana zavatra tsara, amin'ny anaran'i Jesosy.
23 Ry Tompo ô, mitsangàna, ka aza manala baraka ny hery rehetra manafika an'Andriamanitro.
24. Amin'ny anaran'i Jesosy, avelao ny lohalika rehetra hiankohoka amin'ny satana.
25. Tsy mety mihinana ny mofon'ny alahelo amin'ity taona ity aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Ringana ny mpanohitra ara-panahy rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Avelao ny rivotra atsinanana hahavoa sy mahamenatra ireo Farao sy Egyptiana ara-panahy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Ataovy zavatra amin'ny fiainako amin'ity fotoam-bavaka ity izay hanova ny fiainako ho tsara, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Tompo ô, vonjeo amin'ny ratsy rehetra aho amin'ity taom-baovao amin'ny anaran'i Jesosy ity.
30. Tsy hangataka vola na zavatra hafa aho amin'ity volana ity amin'ny anaran'i Jesosy
Misaotra anao tamin'ny famaliana vavaka.
Previous lahatsoratra40 Mivavaka momba ny famoretana.
Next lahatsoratraZava-bavaka 30 momba ny olona mampangina
Charles 31 Desambra 2018 Amin'ny 6:10 maraina
Augustus T. Seongbae, ll 8 Janoary 2019 Tamin'ny 3:11 maraina
Izaho dia pastera Seongbae avy any Liberia, misaotra tamin'ny vavaka natao ho anao ara-panahy. Tombontsoa ho azy ireo ny minisiterako.
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 8 Janoary 2019 Tamin'ny 4:02 maraina
Andriamanitra hitahy anao pasitera, enga anie Andriamanitra hitahy ny ministeranao ary hamonjy fanahy an-tapitrisany amin'ny alalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy.
Mahery Okechukwu 8 Janoary 2019 Tamin'ny 6:25 maraina
Misaotra betsaka tompoko .. Amin'ny anaran'i Jesosy, tapako avy amin'ny hosotra anao ny fahalehibeazana amin'ity taona 2019 ity .. Amin'ity foto-bavaka ity, dia hisokatra ny varavarana miharihary amin'ny harena, ny fahalehibiazana, ny fahatapahana dia hivelatra mba hipetrahako.
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 8 Janoary 2019 Tamin'ny 8:17 maraina
Manaja anao tompoko ny Tompo, Amin'ny anaran'i Jesosy.
Ben olie 15 Janoary 2019 Amin'ny 6:51 hariva
Misaotra anao noho ny tso-bavaka mahery rehetra nihaona be ahy Loholona Ben olie avy any Nizeria
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 15 Janoary 2019 Amin'ny 8:59 hariva
Hanome voninahitra anao tompoko ny Tompo.
Mpitandrina kuta w Boulner 17 Janoary 2019 Amin'ny 11:21 hariva
Voahosotr'Andriamanitra, voatahy aho amin'ireto fitaovam-piadiana ara-panahy ireto, pasitera vavy avy any Liberia aho maniry hahita ny fihetsik'Andriamanitra amin'ny fiainako ny asa fanompoana nataontsika dia nahazo tombony tamin'ireto teboka vavaka ireto ary noana izahay fa hampitombo anao hatrany Andriamanitra. Misaotra.
Ny Pasitera Ikechukwu Chinedum 18 Janoary 2019 Tamin'ny 12:06 maraina
Hotahin'Andriamanitra anao pasitera, hahita asa hafahafa ianao amin'ny ministeranao amin'ity taom-baovao ity.
Mpitandrina P 25 Desambra 2019 Amin'ny 4:16 maraina
Voahosotr'i ANDRIAMANITRA ao Swaziland sy pasitera, enga anie ianao hitahy be dia be ilay lehilahin'Andriamanitra tokoa tokoa fa mamono fitaovam-piadiana be loatra hanoherana ny devoly ianao.Mandresy izao tontolo izao ho an'i Jesosy Kristy amena
Idiongo Akpanukoh 6 Janoary 2020 Tamin'ny 6:28 maraina
Fanamarihana: Misaotra anao ry Pastora malalako tamin'ny nanomezany ireo foto-bavaka izay hitako fa tena ilaina sy loharanon'ny tsodrano ho an'ny fiainako. Enga anie ny Tompontsika tsara fanahy hanohy hampiasa anao amin-kery ho an'ny asany Fanjakana, Amena.
Seun 10 Janoary 2020 Amin'ny 7:39 hariva
Misaotra ianao tompoko
Lukonga 26 Febroary 2020 Amin'ny 9:48 alina
Misaotra anao tamin'ny teboka am-bavaka, enga anie ny Andriamanitra Mahery Indrindra hitahy anao amin'ny asanao ao amin'i Jesosy Kristy.
alfred christana 7 martsa 2020 Amin'ny 11:01 hariva
Ilay lehilahin'Andriamanitra misaotra anao tompoko anie ny Tompo hitahy anao be tompo
Fish 16 Febroary 2021 Amin'ny 8:59 maraina
Vavaka hanoherana ny fanambarana ratsy
Fanambarana mivavaka mahery manohitra ny vokatry ny faharatsiana
Vavaka amin-kery mba handresena ny fitsikeranana ny tena